Wararka Maanta: Arbaco, July 14, 2021-Dhakhaatiir reer Somaliland ah oo madaarka Muqdisho taransit ku ahaa oo Hargaysa loo mastafuriyay
Dhakhaatiirta oo ka hawl gala isbitaalka Adna Adan ee Hargaysa ayaa u socday waddanka Kenya iyagoo ku safrayay baasboorka Somaliland.
"Waa shaqaale caafimaad oo tababar u socday, oo ku safrayay baasboorka Somaliland, oo fiise loogu soo saaray" sida waxa tidhi Adna Aadan Ismaaciil.
"Dadkii ka sokeeya meesha ay ku socdaan baasboorada lagama qaado, lagamana jeex jeexo, dhib kalena looma gaysto" ayay tidhi Adna.
"Meesha ay u socdaan ayaa hadii ay aqoonsantahay dalku gal ka, u ogolaata ama u diida" ayay hadalkeeda sii raacisay Adna.
"Haday Soomaaliya garanayso sharciga dad taransit ah baasboorka kamay qaadeen oo kamay jeex jeexdeen, 3 maalmood qafaalasho kumay haysateen" ayay tidhi.